Esi mepụta akaụntụ PayPal: nzọụkwụ site na iji nwee akaụntụ | ECommerce ozi ọma
PayPal bụ otu n’ime ụzọ izizi ịkwụ ụgwọ n’ụwa. Jiri akaụntụ ya, ị nwere ike izipu ego na mba niile dị n'ụwa. Na mgbakwunye, imepụta akaụntụ Paypal bụ n'efu, nke ahụ pụtakwara na, mgbe ị ga - eme usoro n'ịntanetị, kama iji kaadị akụ gị, nnyefe, ma ọ bụ ego na nnyefe, ị ga - ahọrọ nke a n'ihi na ọ dị ngwa ma nwee nchedo .
Ma ọ ka dị. Ka oge na-aga, ahapụla ya na ndabere, ebe ụzọ nkwụnye ụgwọ ndị ọzọ apụtala na omume ndị ahịa emeela ka ha tụkwasị obi ịzụta n'ụzọ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịmata esi mepụta akaụntụ PayPal, na ihe kpatara na ọ nwere ike ịbara gị uru, echefula ilele ihe anyị kwadebere.
1 Gịnị bụ PayPal?
2 Gini kpatara iji PayPal?
3 Otu esi emepụta akaụntụ PayPal
3.1 Gaa na PayPal peeji nke
3.2 Dejupụta nkọwa
3.3 Have ga-abanye na akụ nkọwa ịmepụta Paypal akaụntụ
4 PayPalgwọ PayPal n'ọdịnihu
4.1 Otu esi emechi akaụntụ PayPal gị
Gịnị bụ PayPal?
PayPal bụ n'ezie ụlọ ọrụ. Site na America, ọ na-enye a usoro ugwo na ugwo maka ndi oru na ulo ahia, ikwe ka ịnyefe ego n'etiti ndị ọrụ. E hiwere ya na 1998 ma ka na-arụ ọrụ taa, ọ bụ ezie na ọ hụla ndị ọzọ na-asọmpi nke na-eme ka ọ daa azụ ma e jiri ya tụnyere usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ.
Gini kpatara iji PayPal?
Ugbu a na ịmara ihe PayPal bụ, ajụjụ ọzọ ị nwere ike ịjụ onwe gị bụ ihe ị ga-eji ya. Na mbụ, PayPal bara ezigbo uru maka ndị malitere ịrụ ọrụ n'ịntanetị. Nke ahụ bụ, ndị na - ede kọọpịraị, ndị na - ede akwụkwọ, ndị na - emepụta websaịtị ... ebe ọ bụ na ọ bụ ọsịsọ, ụzọ kwụ ọtọ na ụzọ dị nchebe iji kwụọ ụgwọ, ma ọ bụ n ’mbu ma ọ bụ na ọ bụghị, maka ọrụ ị rụrụ.
Ma ọ bụghị naanị nke ahụ. Ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị malitere inye aka ịkwụ ụgwọ site na PayPal, nke, n'ihi na ị gaghị enye nkọwa ụlọ akụ gị ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ, naanị email gị, nyere gị nchekwa. Na agbanyeghị na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ na ụlọ ahịa ndị a dị n'ịntanetị, ọ bara uru ịchekwa data gị.
N'ihi ya, taa PayPal ka bụ a ụzọ dị irè na nke ị nwere ike iji maka ọtụtụ. Dịka ọmụmaatụ:
Nwere ike ịzụta ya na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ya dịka ụzọ ịkwụ ụgwọ. Anyị na-ekwu, dịka ọmụmaatụ, nke Ebay, eCommercers na usoro ịkwụ ụgwọ a, Aliexpress ...
Nwere ike izipu ego nye ndị enyi na ezinụlọ. Mgbe ha nọ na Spen ha anaghị akwụ ụgwọ ọrụ, mana mgbe ha si mba ọzọ enwere ike ịnwe ọrụ ụfọdụ (mgbe ụfọdụ karịa obere na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ).
Nwere ike ịrịọ ịkwụ ụgwọ ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ onye ahịa ga-akwụ gị ụgwọ.
Nwere ike ịnweta ego, ma ọ bụ site n'aka ndị ahịa, ndị enyi, ezinụlọ, wdg.
Ma ka anyị banye n’ihe dị ezigbo mkpa. Nakwa ihe mere i ji rute ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ - mepụta akaụntụ PayPal, Ikwesiri ima ihe ndi ozo igha eme iji mee ya, ma lee anyi n’emezu n’otu n’otu.
Gaa na PayPal peeji nke
Mepụta akaụntụ PayPal enweghị ike ịme ma ọ bụghị, yabụ kpachara anya ma ọ bụrụ na ị hụ ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla ebe ha ga-ejikwa ihe okike gị. Na mgbakwunye, ọ bụ usoro n'efu nke na-agaghị efu gị karịa 5 nkeji.
N'ihi ya, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga ebe nrụọrụ weebụ ha wee pịa bọtịnụ "Mepụta akaụntụ".
Ọzọ, nke mbụ mpempe ozi ị ha na-aga ịrịọ bụ ka ị tinye email. Nke a ga - abụ email ga - ejikọ akaụntụ PayPal gị na ụlọ akụ gị (na kaadị akwụmụgwọ) yabụ anyị kwadoro ka ị ghara iji otu email ahụ ị na - ejikarị eme ihe, kama mepụta otu ihe, ma ọ bụ na ị na - eji obere, yana nchekwa gabigara ókè, iji zere nsogbu.
Ozugbo i tinyere ya, pịa bọtịnụ na-aga n'ihu.
N'oge ahụ, ị ​​ga-ejupụta data dịka obodo, aha, aha nna, okwuntughe (ọzọ họrọ nke nwere nchebe).
Ga-anakwere usoro ojiji yana, n'ikpeazụ, ị ga-pịa bọtịnụ ike akaụntụ ahụ ka ọ dị ire.
Have ga-abanye na akụ nkọwa ịmepụta Paypal akaụntụ
Ee ee, ugbu a ọ bụ oge itinye nkọwa ụlọ akụ gị, n'ihi na PayPal chọrọ ozi a iji mara ebe ị ga-enweta ego ịkwụ ụgwọ. Ozugbo ị mechara, PayPal ga-emerịrị nkwenye, ya bụ, ọ ga-eme nkwụnye ego na ụgwọ na akaụntụ gị na nọmba ụfọdụ. Nke a na - ewe ụbọchị 1-3 ime, ị ga - achọ koodu ndị ahụ iji nyochaa akaụntụ PayPal gị yana na ụlọ akụ bụ nke gị iji bido iji ya.
Ma nke ahụ bụ ya. Ozugbo ekwenyechara, ị ga-enwe ike iji PayPal rụọ ọrụ na ihe ọ bụla ịchọrọ (ma kwe ka ọ bụrụ usoro ịkwụ ụgwọ).
PayPalgwọ PayPal n'ọdịnihu
Anyị enweghị ike ịhapụ edemede a n’ebughị ụzọ kwuo okwu zuru ezu nke ị kwesịrị ichebara echiche, ọkachasị ebe ọ bụ na ekwuputara ya na nso nso a na ị kwesịrị, dabere na ya, tụlee ya.
Na, n'ihi na enwere ọtụtụ akaụntụ PayPal ndị a gbahapụrụ, ụlọ ọrụ ahụ ekpebiela "ịkwụ ụgwọ" maka ha. Gịnị ka anyị na-ekwu? Na akaụntụ PayPal gị ga-enwe ego mmezi nke euro 12 kwa afọ.
Tupu ị kwuo na ị chọghịzi ịmepụta akaụntụ PayPal, chere. A ghaghị ịkwụ ụgwọ ahụ (n'eziokwu, a ga-esi na ụlọ akụ ozugbo) ọ bụrụhaala na ị naghị eji akaụntụ Paypal gị.
Nke ahụ bụ, anyị na-ekwu maka ọrụ ahụ Ọ ga-adị ire ma ọ bụrụ na iji akaụntụ PayPal gị akwụ ụgwọ, zipu ego, ma ọ bụ nata ya. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla n'ihi na ị na-agwa ha na akaụntụ gị na-arụ ọrụ, nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe ha chọrọ, na ndị ọrụ edebanyere aha na-eji ha dịka ụzọ ịkwụ ụgwọ (ma ọ bụ izipu ego) maka ndị ọzọ.
Otu esi emechi akaụntụ PayPal gị
Ọ bụrụ na ohere ọ bụla ị na-aga - mepụta akaụntụ PayPal ma ị gaghịzi eji ya, Ma ọ bụ n'ihi na ị hụghị na ọ bara uru, ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ, ị kwesịrị imechi akaụntụ Paypal gị iji zere ọrụ ahụ.
Iji mee nke ahụ, usoro ndị a bụ:
Gaa na ukara PayPal peeji nke. Ozugbo ahụ, tinye email na paswọọdụ iji tinye akaụntụ gị.
Ozugbo ị banye n'ime, gaa na "Akaụntụ m" wee, site n'ebe ahụ gaa na "profaịlụ".
Na Profaịlụ, ị ga-ahụ ọtụtụ igbe, otu n'ime ha, na njedebe nke ihe niile, nke nke «Mechie akaụntụ».
Ozugbo i mere, ọ ga-arịọ gị maka nkwenye na ị chọrọ n'ezie imechi akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị nyeghachi ya, ọ ga-emechi akaụntụ gị na ị gaghị enwe ike iweghachite ya ọzọ, ya bụ, ị ga -emepụta nke ọhụrụ ịmalite iji PayPal ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Otu esi emepụta akaụntụ PayPal
Gịnị mere o ji dị mkpa ịnweta weebụsaịtị maka azụmahịa?